Abasebasha bafuna ukunqanda ubugebengu | News24
Abasebasha bafuna ukunqanda ubugebengu
UMNYANGO wezokuPhepha, nokuXhumanisa uMphakathi ubuhlele inkulumo-mpendulwano ebanjelwe ehholo lo mphakathi eThukela, ngoLwesihlanu oledlule, ngomhlaka 27 kuLwezi (November).
Umhlangano ubuhanjelwe uKhomishana wamaphoyisa esifundazwe, u-Lieutenant General Mmammonye Ngobeni, uSihlalo wama-CPFs esifundazwe uMnuz Desmond Mntambo, uSihlalo we-Youth Desk uMnuz Lungelo Zulu, u-Cluster Commander KwaDukuza u-Brigadier Bheki Zondi kanye namalungu omphakathi. Inhloso yalenkulumo-mpendulwano bekungukuthola indlela imphakathi engasebenzisana ngayo namaphoyisa ukulwisana nobugebengu.
UMnuz Zulu uthe siyabhebhetheka isihlava sobugebengu emphakathini yesifundazwe. Uqhube ngokuthi anxuse abantu abasebasha ukuba bedlale indima ekulweni nobugebengu. Uthe: “Abantu abasebasha banamandla okubhekana nalesi simo, yibona abangenza imphakathi yabo ukuthi ibenokuphepha,” kusho uMnuz Zulu. Ugqugquzele abantu abasebasha ukuthi bengazi bandakanyi nobugebengu futhi begweme ukuthenga impahla entshontshiwe. Uqhube ngokunxusa abantu abasebasha abesilisa ukuba bengahlukumezi abantu besifazane kanye nezingane. UMnuz Zulu uthe i-Youth Desk iyaziqhelelanisa nokuthi kumele amaphoyisa adubule abasolwa ngenhloso yokubulala. Uthe: “Asisho ukuthi amaphoyisa kumele adubule abasolwa, noma umsolwa, ngenhloso yokubulala. Thina sithi amaphoyisa awadubule ngenhloso yokuphuca abasolwa izikhali,” kusho uMnuz Zulu. Uqhube wathi abantu abasebasha kumele beziphathe kahle njengoba kuzoqala amaholide enyangeni uZibandlela (December).
USihlalo wama-CPFs, uMnuz Mntambo uthe ukubulawa kwamaphoyisa kufana nokuhlaselwa kwesizwe sonke. Uqhube wathi ukubhebhetheka kwezi ndawo ezidayisa utshwala emphakathini kanye nezinga labantu abangasebenzi kudala ubugebengu. UKhomishana wamaphoyisa esifundazwe, uNkk Ngobeni unxuse imphakathi ukuba isebenzisane namaphoyisa ukuze kuzonqandeka ubugebengu emphakathini.